Noloshaada noolow oo ha iloobin da'daada. - Jean Paul - xigasho Pedia
Noloshaada noolow oo ha iloobin da'daada. - Jean Paul
Hadaad rabto inaad noloshaada ugu noolaato si farxad leh, kama fikirin da'daada. Waa inaad tixgelisaa in da'daasi wax aan ahayn mooyee. Intooda badan waxaan jecel nahay inaan ka fikirno in da’du waxbadan qabato markay tahay noloshaada.
Hagaag, waxaan ku nool nahay hoos udhaca khaldan ee aanan sahamin karin dhinacyada kala duwan ee nolosheena hadaan gaboobo. Laakiin haddii aad u go'antahay wax ku filan, qofna kaa joojin maayo inaad ku noolaatid noloshaada sida aad jeceshahay. Hal shay oo ay tahay inaad hubiso waa inaad maskaxda ka xoog badan tahay si aad ugu noolaato noloshaada kuna saleysan qiyamkaaga.
Wax walbana waxay kuxiran yihiin cilmu-nafsigaaga iyo awooda maskaxda. Haddii aad nafsiyan ku xoogan tahay, waxaad ku guuleysan kartaa yoolalka aad rabto noloshaada, xiitaa haddii aad duq tahay. Da'daadu saameyn kuma yeelan doonto ujeeddada noloshaada. Waxa kaliya ee kugu caawin doona inaad gaarto yoolkaaga ayaa ah rabitaankaaga.
Hagaag, waan fahmi karnaa in da’da ay leedahay wax muhiim ah oo la sameeyo marka ay timaado awoodaha jirkaaga. Waa xaqiiqo caadi ah in aad waayi doontid firfircoonaanta iyo xoogga aad ku haysay noloshii hore.
Si kastaba ha noqotee, sidaan horeyba u sheegnay, haddii rabitaankaagu xoog badan yahay oo aad maskax ahaan diyaar u tahay inaad gaarto yoolkaaga, qofna kaa joojin maayo taas. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameysatid waa inaad naftaada u diyaariso maskax ahaan, waxaadna ka marag kici doontaa inaad kalsooni buuxda iyo tamar buuxda ka buuxdo.
Hagaag, haddii aad wax yar ka qodmi ​​karto, waxaad ogaan doontaa inay jiraan tusaalooyin badan oo dadka waaweyni ay ku gaareen bartilmaameedkii ay damacsan yihiin. Marka had iyo jeer isku day inaad naftaada dhiirrigeliso, waxayna kaa caawin doontaa inaad gaarto yoolkaaga aad rabto. Adiga ha ka walwalin da'daada maadaama ay tahay tiro uun.
Xigashooyinka gaagaaban ee ugu wanaagsan
Qodobo La Yidhaahdo
Helitaanka xigashooyinkii hore
Helitaanka xigashooyin duug ah
Qormooyin Weyn oo Lagu Noolaanayo
Koraan Quotes Older
Xigashooyinka waxyiga ah ee nolosha
Noloshu Waa Qiso Naxdin Leh
Noloshu Waa Mid Aad U gaaban
Ku noolaanshaha xigashooyinka waqtiga
Quotes Life Life
Soo Jeedinta Nafta Nolosha Gaaban
Xigashooyinka nolosha wanaagsan
Xigashooyin awood leh oo kusaabsan nolosha
Xigashooyinka ku saabsan helitaanka gabowga iyo Wiser
Qodobbada ku saabsan Nolosha
Xigashooyin toosan oo gaaban
Adiga oo Kaliya Nolosha Hal Mar Quotes
Xuquuqda daabacaadda 2020 © www.quotespedia.org
Waxaan isticmaalnaa cookies si loo hubiyo in aan ku siin waayo-aragnimo ugu fiican ee website-kayaga. Haddii aad sii isticmaasho this site waxaan u qaadan doonaa in aad ku faraxsan la jira.Ok